महामारीमा महिनावारीको पाप ! | Nagarik News - Nepal Republic Media
महामारीमा महिनावारीको पाप !
११ भाद्र २०७७ ३ मिनेट पाठ
कोरोना महामारी र वर्षाजन्य विपदले एकैसाथ आक्रमण गरिरहेको भए पनि नेपाली हिन्दू महिलाले आपसमा सकेसम्म खुसी साटासाट गरेर तीज मनाए । सहरी क्षेत्रमा एक महिना अघिदेखि नै भोजभतेर गरेर मनाउने गरिएको तीज यसपालि कोरोना भाइरसले पूरै छेकिदियो ।
पञ्चमीको दिन थियो । बिहान उठ्न नपाउँदै बाहिर छिमेकी बोलेको सुनियो । आफ्नो धर्म र संस्कृति पनि मान्न नपाइने यो के महामारी आयो भन्दै कोरोनालाई बेस्सरी गाली गर्दै थिए । उनीहरू निकै चिन्तित देखिन्थे । ‘यसपालि पञ्चमी नुहाउन पाइएन । दतिवन गर्न पाइएन...।’ हामीले थाहा पाएदेखि पञ्चमी नुहाएर शुद्ध नभएसम्म त्यो वर्षको पाप काटिँदैन भन्ने मान्यता छ । त्यही सोच र अभ्यासले ग्रस्त छौं हामी । पाप नकाटिने भयो भन्ने डर र चिन्ताले दुःखी स्वरमा उनीहरू पीडा पोख्दै थिए ।
तिनै छिमेकीकाे कुरा सुन्दै विचार गर्दे थिएँ । त्यही बेला मेरो आफन्तबाट मलाई फोन आयो र भन्न थाल्नुभयो– ‘दतिवन छ कि छैन ? ल्याइयो कि ल्याइएन ? माटो कहाँको छ ? छैन भने तुलसीको फेदको माटोले सबै विधि गर्नू । घरमैै भए पनि दतिवन गनेर टोक्नू । घरपछाडि लगेर फाल्नू । के गर्ने बगाउने ठाउँमा जान नि पाइएन । यसपालि बर्बाद भयो ।’
मेरा छिमेकी, मेरा आफन्तमा मात्र हैन, महिनावारीलाई पाप ठान्ने मानसिकता समाजभरि व्याप्त छ । महिला होस् वा पुरुष, शिक्षित होस् वा अशिक्षित सबैमा यो सोचले जरा गाडेको छ ।
अनि फेरि भनन थाल्नुभयो– ‘तिमी त वर्षभरि नै आफैंले पकाएर खान्छौ । महिनावारी पनि बार्दैनौ । त्यत्रो वर्षभरिको छोइछाइ पनि कटाउनुपर्ने थियो । यसपालि पाइएन के गर्नु ! हामीलाई भन्दा पनि त तिमीलाई पञ्चमी पूजा नलगाई नहुने थियो । कस्तो बर्बाद भयो यो पल्ट । लौ अब जे भए पनि नुहाईधुवाई गर्नू, घरमै भए पनि ऋषिपूजा गर्नू । नजिकै बाहुन छैन होला, मास्क लगाएर घरमै पूजा लगाउन पाको भए जाती हुन्थ्यो । के गनूर्, यो कोरोनाले गर्नु गर्यो !
‘यसपालिको पापले कहिलेसम्म दुःख दिने हो ?’ यति भन्दाभन्दै फेरि थप्नुभयो– ‘आज नि फेरि आफैं पकाएर खाने होला ? आफू खाए पनि घरका छोरा मान्छेलाई नदिनू । आफैं बनाएर खान भन्नू । आज केटी मान्छेले छोएको केटा मान्छेले खानु हुँदैन ।’ एकदम दुःखी भएर सचेत गराउनुभयो– ‘पाप लाग्छ बाबै ! कुल जोगाउनू । तिमीहरू मान्दैनौ । अघिपछि जे जे गरे पनि त्यै पञ्चमी गरेर कटाउनुपर्ने । यसपालि त्यो नै भएन । अब के हुने हो ! लौ अब विचार गर है ।’ यति भनेर फोन राख्नुभयो ।
मैले हस् हस् मात्रै भनिरहें । प्रतिवाद गर्न उचित थिएन । मैले सानैदेखि अर्थात् पहिलो महिनावारीदेखि नै महिनावारी भनेको पाप हो र पञ्चमी पाप कटाउनका लागि गरिने कर्म हो भन्ने सुनिरहेकी छु । वास्तवमा त्यो फोनमा मैले एउटी महिलाको मात्र होइन, समाजको प्रतिनिधि आवाज सुनिरहेकी थिएँ । तर आजसम्म गरिएको पञ्चमीले कति पाप कटायो ? मनमा प्रश्न उठिरहेको थियो ।
‘पाप लाग्छ बाबै ! कुल जोगाउनू । तिमीहरू मान्दैनौ । अघिपछि जे जे गरे पनि त्यै पञ्चमी गरेर कटाउनुपर्ने । यसपालि त्यो नै भएन । अब के हुने हो ! लौ अब विचार गर है ।’
आखिर कुल जोगाउने जिम्मा त महिलाकै रहेछ । अरू कुरालाई सामान्य मान्दामान्दै पनि एउटा वाक्यले मनमा डरजस्तो उत्पन्न गरायो । तर अब कुलको जिम्मा नै पञ्चमी पूजामा जोडियो । महिनावारीलाई अपवित्रतासँग जोडियो । देउता रिसाउने, कुल मासिने, डर मनमा छिराउन खोजेको कुरा त बुझेकी थिएँ । किनकि कुलचाहिँ पुरुष थिए । त्यहाँ पिृतसत्ता जोगाउनु थियो । मेरा छिमेकी, मेरा आफन्तमा मात्र हैन, महिनावारीलाई पाप ठान्ने मानसिकता समाजभरि व्याप्त छ । महिला होस् वा पुरुष, शिक्षित होस् वा अशिक्षित सबैमा यो सोचले जरा गाडेको छ ।
तर यसो भनेर समाज परिर्वतन नै भएको छैन, जहाँको तहीं छ भन्ने पनि होइन । रूढिवादी परम्परामा केही परिवर्तन पनि आएका छन् । तर पनि यसले रूप फेरीफेरी हैकम जमाइरहेको देखिन्छ । महिनावारी कुनै पाप होइन, अशुद्धता र अपवित्रता होइन भन्ने बुझ्न जरुरी छ । महिला आफैंले पनि बुझ्न जरुरी छ । महिनावारी त प्राकृतिक प्रक्रिया हो ।
महिनावारीका निहुँमा भेदभाव र अवहेलना समाजको तीतो यथार्थता हो । अब त अति भयो । अब अस्वस्थ र अमानवीय अभ्यास परिवर्तन गरौं । रूढिवादी मानसिकता बदलौं ।
(एमफिल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौं )
प्रकाशित: ११ भाद्र २०७७ ०६:५७ बिहीबार
नेकपा गाउँ कमिटी सचिवका हत्यारालाई कारवाही माग गर्दै ज्ञापन
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)पर्साका नेता कार्यकर्ताले आज यहाँ प्रदर्शन गरेका छन्। नेकपा पर्सा, विन्दवासनी गाउँ कमिटीका सचिव मुकेश चौरसियाका हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको हो।
क्षेत्रीय रक्तसञ्चार केन्द्र भरतपुरले सङ्कलित कोभिड–१९ सङ्क्रमण भई निको भएकाका प्लाज्मा अन्य जिल्लामा पठाउन थालिएको छ। अन्यत्र आवश्यक भएपछि यहाँबाट पठाउन थालिएको हो।